Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစားမော်ကွန်းတိုက်မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား
လိုင်စင်ရ LEGO Collectible Minifigures ၏နောက်ထပ်လိုင်းတစ်ခုလာနေပြီ
12 / 09 / 2021 12 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 137 Views စာ0မှတ်ချက် 2022, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Instagram ကို, Lego, Lego 2022, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, မဲ Ashton
မကြာသေးမီကအမေးအဖြေတွင် The Design ၏ Vice President နှင့်အတူ LEGO Groupလိုင်စင်ရ Collectible Minifigures ၏အခြားလိုင်းတစ်ခု
11 / 09 / 2021 11 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 136 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, ကဗျာ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey, ဖုတ်ကောင်
ပထမဆုံး LEGO တွင် minifigures များထဲမှတစ်ခု Marvel စုဆောင်းနိုင်သော Minifigures စီးရီးများသည်စီရင်ချက်နှစ်ခုပြသခြင်းမှုတ်သွင်းနိုင်သည်
06 / 09 / 2021 06 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 151 Views စာ0မှတ်ချက် 71031, 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ကလင် Barton, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, Marvel ဖုတ်ကောင်, ပိုစတာ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, ကဗျာ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey, ဖုတ်ကောင်
01 / 09 / 2021 28 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 85 Views စာ0မှတ်ချက် 71031, 71031 Marvel စတူဒီယို, မိကျောင်း Loki, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, Spider-Man, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Throg, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ…?
ပထမ LEGO Marvel Collectible Minifigures များကိုယခုရနိုင်သည်
01 / 09 / 2021 01 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 141 Views စာ0မှတ်ချက် 71031, 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, Spider-Man, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
LEGO ၏ပထမဆုံးသောစီးရီး Marvel Collectible Minifigures သည်နောက်ဆုံးပရောဂျက်များကိုကျင်းပရန်စုဆောင်းရန် minifigures ၁၂ ခုနှင့်အတူရှိသည်
30 / 08 / 2021 30 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 167 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Gamora, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, သေးသေးလေး, စတား-သခင်ဘုရား, Thanos, T'Challa စတား - Lord, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
LEGO 71031 ဆိုတာဘယ်သူလဲ Marvel စတူဒီယို 'T'Challa Star-Lord?
29 / 08 / 2021 29 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 156 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Black က Panther, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဒိုမီလာဂျေ, Kraglin, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, အသေးစား, သေးသေးလေး, Nebula, စတား-သခင်ဘုရား, မျက်နှာစာ, Thanos, T'Challa စတား - Lord, Wakanda, Yondu
အဆိုပါ LEGO Group ပထမဆုံးထုတ်လွှင့်တော့မည် Marvel Collectible Minifigure ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပေမယ့်ဒီ alternate outlaw ကဘယ်သူလဲဆိုတာသိပါတယ်
LEGO 71031 ဆိုတာဘယ်သူလဲ Marvel Studios 'Zombie Hunter Spidey လား။
28 / 08 / 2021 29 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 173 Views စာ0မှတ်ချက် 71031, 71031 Marvel စတူဒီယို, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Spider-Man, Marvel, Spider-Man, ပင့်ကူလူသား, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
Lego 71031 Marvel စတူဒီယို၏ Zombie Hunter Spidey သည်၎င်း၏ပထမဆုံး Collectible Minifigures စီးရီးထဲသို့ ၀ င်သည်။
23 / 08 / 2021 24 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 261 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Avengers, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: Infinity စစ်ပွဲ, Captain America, Captain America နှင့် Winter Soldier, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, hulk, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, Marvel's Avengers Infinity စစ်ပွဲ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier